Anwụnta egbu egbu Oriọna PJS-LFD - China Xiamen PJS Technology
Anwụnta egbu egbu Oriọna PJS-LFD
√.FAN mmiri KWURU: The ọhụrụ kwalite anwụnta na-egbu e mere na ike mmiri na-akwado na elu Ikanam ìhè isi, irè n'ihi na rafuru anwụnta na aṅụ ha n'ime oriọna, ha ga-dehydrate na anwu.
√.SAFE & nontoxic: The Ikanam anwụnta oriọna adopts ahụ ụzọ igbu anwụnta. Ọ dịghị nsị, emerụ Chemicals ma ọ bụ ụzarị ọkụ, 100% mma maka ahụ mmadụ na anu ulo, nnọọ eco-enyi na enyi na-eri-irè ụmụ ahụhụ akara ngwọta.
√.EASY iji & ọcha: kwadoro site na USB cable, nwere ike plugged n'ime bụla mobile ike esenyịn, na kọmputa ma ọ bụ chaja ekwentị. Large ikike nchekwa igbe na-eme ka ọ dị mfe iji wepu maka nhicha na ikpofu nwụrụ anwụ mosquitos site mfe agbagọkwa.
√.USER-enyi na enyi Kere: E nwere obere akpa ke n'elu, ma ọ dị mkpa, ị nwere ike wepu obere cover na-etinye na ihe siri ike ma ọ bụ mmiri mmiri ọgwụ ọchụ ahụhụ n'ihi na mma mmetụta. The wuru na-akwado ga-arụ ọrụ silently, ọ dịghị nnukwu mkpọtụ na-akpaghasị gị bara uru ụra.
√.WIDE Ngwa: Great maka ime ụlọ were, dị ka ụlọ, ime, na ndụ ụlọ, kichin, ụlọ ọrụ, nkwakọba, hotel, wdg na-echebe megide manụ na ọrịa na-ebu ijiji / ahụhụ. Zuru okè n'ihi na anwụnta, obere chinchi, ijiji na ndị ọzọ ụmụ ahụhụ.
EXW Price: US $ 4.36- $ 4.68 / iberibe
item Name Anwụnta egbu egbu Oriọna
Item Mba PJS-LFD
udi ero Ọdịdị
Input voltaji / Ugbu A 5V / 1a
motif Design ahaziri
ọrụ iche 60㎡
packaging 1pcs / igbe, 24pcs / katọn
USB powered kwadoro site na kọmputa, Laptọọpụ, ike akụ, USB nkwụnye na na, adaba n'ihi na ị na-eji
ngwa Home Office ime Living ụlọ Kitchen Restaurant Garden Ihu ilo Yard
NCHEBE & nontoxic Ọ dịghị nsị, emerụ Chemicals ma ọ bụ ụzarị ọkụ, 100% mma maka ahụ mmadụ na anu ulo
Isi ihe ABS / eyi
Fan mmiri KWURU Strong mmiri ofufe na elu Ikanam ìhè isi
USB cable Ee
Net arọ (n'arọ) 0,36
Mbupu arọ (n'arọ) 0,65
Previous: Anwụnta egbu egbu Oriọna PJS-KL193
Next: Anwụnta egbu egbu Oriọna PJS-PC006
ime anwụnta Night Oriọna
E27 15w anwụnta egbu egbu Oriọna
Electric ahụhụ egbu egbu Igbu anwụnta
Electric anwụnta egbu egbu
Electric anwụnta egbu egbu oriọna
Electronic anwụnta egbu egbu
Electronic anwụnta egbu egbu Night oriọna
Garden Solar anwụnta egbu egbu oriọna
ahụhụ anwụnta egbu egbu Night oriọna
Dugara anwụnta egbu egbu Oriọna
Dugara anwụnta Oriọna
Mere anwụnta Zapper
anwụnta egbu egbu
anwụnta egbu egbu Na Night Oriọna
anwụnta egbu egbu Mere bọlbụ
anwụnta egbu egbu Dugara Night Light
anwụnta Night oriọna
anwụnta ọgwụ ọchụ
anwụnta n'Ajọ With UV Light
Night Oriọna na anwụnta egbu egbu
N'èzí anwụnta egbu egbu
N'èzí anwụnta Zapper
rechargeable Electric anwụnta egbu egbu
rechargeable anwụnta egbu egbu
rechargeable anwụnta egbu egbu Oriọna
Solar anwụnta egbu egbu
Solar UV anwụnta oriọna
USB anwụnta egbu egbu oriọna
USB rechargeable anwụnta egbu egbu Oriọna
UV Oriọna anwụnta egbu egbu
UV Light anwụnta egbu egbu oriọna
UV Light anwụnta n'Ajọ
Anwụnta egbu egbu Oriọna PJS-KL193
Anwụnta egbu egbu Oriọna PJS-KL191
Anwụnta egbu egbu Oriọna PJS-GM
Intelligent Light anwụnta egbu egbu Oriọna PJS- EP009
Anwụnta egbu egbu Oriọna PJS-1601
Anwụnta egbu egbu Oriọna PJS-S39